Redmi K20 ga-abụ aha nke elu-elu Redmi | Gam akporosis
Redmi K20: Ọ ga-abụ aha nke elu-elu Redmi
Edere Ferreno | | Mobiles, Xiaomi
Anyị maara maka izu Redmi na-arụ ọrụ na ekwentị dị elu, nke gha enwe Snapdragon 855 dika ihe nhazi. N'ime izu ndị a anyị enwerịrị ọnya zuru ezu banyere ngwaọrụ a. Enweekwara ọtụtụ asịrị banyere aha ekwentị ga-enwe. Ọ bụ ezie na nke a bụ ihe anyị nwere ike ịchọpụta ugbu a. Ebe ọ bụ na ekwenyela na ọ ga-abụ Redmi K20.
Nke a Redmi K20 bụ nke mbụ dị elu nke akara ndị China. Releasebọchị mwepụta ka bụ ihe omimi, ọ bụ ezie na a na-eche na ọ nwere ike ibute na eze n'ọnwa Mee. Ya mere, anyị kwesịrị ịmatakwu banyere ekwentị a n'izu ole na ole sochirinụ.
Na China enwere nkwenye na ekwentị a bụ nwere ike ire n'èzí mba ahụ n'okpuru aha Pocophone F2. Mana ọ dị ka ha bụ asịrị karịa, na-enweghị nkwenye ọ bụla. Anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na Redmi K20 a ga-eresị mba ụwa n'okpuru akara ọzọ, ọ bụ ezie na n'akwụkwọ o yiri ka ọ gaghị adị.
Redmi hapụrụ anyị ọtụtụ ekwentị n'afọ a, tumadi na etiti na nso-nso. Phonesfọdụ ekwentị ndị na-ere ahịa nke ọma, dị ka Note 7, nke na-aga nke ọma n'ahịa. Karịsịa site na ezigbo ahịa ya na India, ahịa nke akara ndị China na-eme nke ọma.
Redmi K20 a bụ ntinye gị na mpaghara asọmpi, dị ka elu-ọgwụgwụ, achịkwa ụdị ole na ole. Mana ọ bụrụ na ha eweta ekwentị nwere ezigbo uru maka ego, dịka ọ dị ka ọ ga-adị. Ya mere, anyị na-eche ihu ihe nlereanya nke nwere ike inye ọtụtụ ihe iji kwuo banyere akụkụ ahịa a.
Anyị na-atụ anya ọtụtụ ihe site na ekwentị a. Maka ugbu a, a ka na-ekwu na Redmi K20 a ga-abata tupu ọnwa agwụ, ọ bụ ezie na anyị adịworị n'etiti. Mana anyị nwere olile anya na ozi ga-eru maka ọbịbịa gị n’oge adịghị anya. Naanị ụlọ ọrụ ahụ na-ekwu na ọbịbịa ya ga-abịa n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Redmi K20: Ọ ga-abụ aha nke elu-elu Redmi
Vodafone ga-eweta 5G na Europe n'oge okpomọkụ a
OnePlus 7 Pro: ọkọlọtọ ọhụrụ nke na-abịa na ihe niile wee bịarute iji dọta uche